Global Voices Alemàna izahay · Global Voices teny Malagasy
Global Voices Alemàna izahay
Voadika ny 10 Jona 2019 14:43 GMT
(Fanamarihana : Lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Novambra 2015)
Iza no ao ambadik'ireo lahatsoratra sy fandikàna ny ampahany amin'ny teny alemàna ato amin'ny vondrom-piarahamonina Global Voices ? Afaka hitanao ny famintinana ny mombamomba sy ny iza no nanoratra sy / na nandika izatsy lahatsoratra izatsy, saingy iza tokoa moa isika ary inona no ifandraisantsika amin'ny Global Voices? Ity andiana antsafa ity dia maniry ny hitondra fijery manokana kokoa momba ireo olona ao an-damosin'ny Global Voices Alemàna.
Julia. Fampiasàna sary natolony tam-pitiavana.
Julia, 27 taona. Alemaina. Mpandika ato amin'ny Global Voices.
Oviana ianao no nanjohy ny Global Voices?
Herintaona lasa izay aho no niditra, ny Novambra 2014. Ny reniko no nilaza tamiko ny momba ny Global Voices (GV) tamin'izany fotoana izany.
Tsaroanao ve ny asa fandikàna voalohany nataonao , ary raha eny, inona izy izay?
Eny, tena tsaroako tsara ilay izy. Lahatsoratra momba ny lafiratsin'ny fahombiazan'ny Alibaba. Alibaba ilay goaiben'ny varotra elektronika shinoa.
Inona no fahalalàna azonao nandritra ny fotoana niarahanao tamin'ny GV hatreto ?
Fantatro fa tena mbola feno fahasamihafàna sy sarotakarina lavitra mihoatra noho izay efa niheverako azy tany amboalohany ity izao tontolo izao ity. Tany alohan'ny nanjohiako ny GV, efa nanomboka namaky vaovao manerantany aho tety anaty aterineto ary tsy niantehitra fotsiny tamin'ireo endrika nentindrazan'ny fampahalalambaovao intsony. Ny GV dia iray amin'ireo loharamo fototra ho ahy rehefa tiako ny hahafantatra mikasika ny zavatra niainana sy ny niafaran'ireo olona niharanà tranga maro hitantsika eny anaty media. Matetika ireny no tsy hita, nefa ireny indrindra no tena tiako hovakiana ny momba azy. Ankoatra ireo zavatra goavana hafa, vitan'ny GV ny manome ahy io topimaso indray mijery io.
Inona no tianao momba ny GV ?
Toy ny nnambarako tetsy aloha, asehon'ny GV avy amin'ny fijerin'ny olona ireo trangan-javatra, dia ireo olona izay iharan'ny zavamitranga mivantana mihitsy. Manampy amin'ny fitondrana fanazavana momba ny olana sy ady ireo marobe mpirotsaka an-tsitrapo ary mazàna no ratsy fijery azy ireny ireo mpampahalàla vaovao mahazatra sy ny vahoaka. Asehon-dry zareo ny tohiny sy ny hirifiry, nefa koa ny zavatra tsara sy mahafinaritra, mampitolagaga. Mety tsy ho nandre mandrakizay momba ireo tantara marobe milaza zavatra miabo sy miiba aho raha tsy teo ny GV.
Nanova ny fijerinao ny zavatra maro ve ny GV ?
Raha hitarina aminà zoro sasany, dia eny. Ankehitriny aho mametraka fanontaniana matetika momba ny zavatra rehetra ary miezaka ny mandeha lalindalina kokoa, izaho no tena liana be amin'ireny olona niharan-javatra ireny. Ny toetra ankapoben'ny zavatra dia na izy manandanja na tsy mahaliana, mzava loatra. Ilainao io mba hanakarana izay tena zavamitranga marina. Saingy katsahako ny hamaky momba ny anton'izy ireny sy ny zavananjo ny tsirairay.
Inona avy ireo endrika manahirana manokana sy / na mampitombo fahalalàna amin'ny fandikàna lahatsoratra ho an'ny GV?
Ho ahy manokana, ny tena fanamby nefa koa ny zavatra iray tena mampitombo fahalalàna indrindra momba ny fandikàna ho an'ny GV dia ny fiantohana ny kalitaon'ny asa fandikàna mba tsy hivilana. Tiako ny manao ny lohahevitra momba ny fitsarana sy mamoaka asa fandikàna vita tsara. Indraindray ilay izy tena sarotra rehefa lohahevitra tsy dia mahaliana anao iny, araka izany dia very ny fifantohantsainao.
Ahoana no fomba iatrehanao ireo lohahevitra manana fahasarotana manokana?
Izy no avelako hanatona ahy, avelako ho tonga eo amiko fotoana vitsivitsy raha lahatsoratra iray somary mandona ny fihetsehampoko manokana. Na izany aza, maka bahana aho avy eo ary mamory indray ny fifantohantsaiko, miverina mifantoka indray amin'ny asako. Ny fanaovana asa fandikàna vita tsara. Amin'ny ankamaroan'ny fotoana, mahomby tsara izay. Misy ihany tranga sasantsasany izay ilàko fotoana misimisy kokoa hanaovana izay fakàna bahana izay.
2 herinandro izayMediam-bahoaka
07 Aogositra 2021Mediam-bahoaka
Songadina Global Voices Jolay 2021